Myanmar Celebrity Family Photos: Nine Nine, Sandi Cho and Junior Nine Nine | Myanmar Celebrity Couple Photos
Myanmar Celebrity Family Photos: Nine Nine, Sandi Cho and Junior Nine Nine
Myanmar popular actor Nine Nine’s wife, Sandi Cho gave birthababe girl on November (12) at Pann Hlaing Special Hospital, Yangon. Nine Nine said that both his first babe girl, named “Junior Nine Nine and Sandi Cho are in good health and they left from the hospital on November 15, 2009. Sandi Cho arrived Yangon from United State of America on September (15) when she had seven months pregnant.
နိုင်းနိုင်းနှင့် စန္ဒီချိုတို့ရဲ့ သမီးဦးလေးကို နိုဝင်ဘာ (၁၂) ရက်နေ့က ပန်းလှိုင်းဆေးရုံမှာ မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ သမီးငယ် ဂျူနီယာနိုင်းနိုင်း ရော၊ မိခင် စန္ဒီ ပါ ကျန်းကျန်း မာမာရှိပြီး နိုဝင်ဘာ (၁၅) ရက်နေ့မှာ ဆေးရုံက ဆင်းခဲ့တယ်လို့ နိုင်းနိုင်းက ဆိုပါတယ်။